Ụlọ ihe nkiri Baby& Kids |Ndị na-emepụta ihe ndị China Baby & ụmụaka, ndị na-ebunye ihe
Nchekwa N'ogbe Baby Molar Teether Toy Animal Giraffe Teether Organic Baby Teethers with Box
Nke a mara mma nwa giraffe ezé ga-ebelata ihe mgbu nke ịta ezé maka ụmụ ọhụrụ.Ịta ahụhụ ọ bụla ga-enyere aka ibelata mgbu chịngọm na n'enweghị nsogbu na ịkwalite mmepe nke ezé nwa na agba elu.E jiri ya tụnyere ngwaahịa ezé nke ihe ndị ọzọ, ọkpụkpụ silicone a dị nchebe ma nwee ihe ndị ọzọ dị n'elu, nke dị mma maka ịzụ ụmụ ọhụrụ.
A na-ebu n'obi nwa ndụdụ silicone na ngaji maka ọkwa nke 1 nke ịhịa aka nwa, nwere ike ịzụlite ikike nwa ahụ iji arịa nri na inye onwe ya nri.Ha enweghị BPA, enweghị BPS, enweghị PVC, enweghị phthalate, enweghị cadmium na enweghị ndu;Nchekwa maka nwa ọhụrụ iji.
Amazon Silicone Baby Chew Toy Safety Teething tube gom Massager
Ejiri silicone ọkwa nri mee ya, ọ dabara maka ụmụ ọhụrụ ịta na iji belata ihe mgbu n'oge ezé ha.
Aha ngwaahịa: tube ezé nwa
Nha: 17.5 * 1 cm
Arọ: 16,5 g
Ihe: Silicone nri ọkwa
Echiche Ngwaahịa ọhụrụ na-ebipụta Silicone Bibs Mix Agba Silicone Bibs Ngwaahịa na-egbochi mmiri Baby Bibs
Ndepụta Ngwaahịa zuru oke nke afọ niile.
Ụdị ihe dị n'ime ngwaahịa ngwaahịa.
Nkọwa dị nkenke.
Ụdị anụmanụ silikoni nwa bib nwere nri nwude:
2.Various na pụrụ iche imewe.
3.No-toxic / mgbochi nje na nchekwa.
Nha Ngwaahịa ma ọ bụ Nha Omenala.
logo Printing LOGO dị;Mbipụta ihuenyo ma ọ bụ mbipụta mpempe akwụkwọ.
MOQ 300pcs / imewe / agba.
Akpa Polybag, kaadị nkụnye eji isi mee, igbe agba, ma ọ bụ ahaziri dị.
Eco Friendly Straw Silicone Trainning Cup Avanchy Mini Silicone Cup
Avanchy Mini Silicone Cup bụ dabara maka nwa ọhụrụ ịmalite ịmụ ihe ọṅụṅụ n'onwe ha.Iko obere silicone anyị bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị nne nke na-echekwa nwa ma ga-adịru ọtụtụ afọ na-abịa.Jiri obere iko silicone a kwalite ibi ndụ ahụike.
Aha ngwaahịa: Obere iko silicone na ahịhịa
Ọrụ: Ịṅụ mmanya
Ọnụahịa otu: 2.61-2.86 USD